युरिक एसिड बढ्यो ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार - pnpkhabar.com
You are at:Home»स्वास्थ्य/जीवनशैली»युरिक एसिड बढ्यो ? यसरी गर्नुहोस् घरमै उपचार
By रबि धिताल on ९ फाल्गुन २०७४, बुधबार १२:४३ स्वास्थ्य/जीवनशैली
युरिक एसिड बढ्नुलाई चलनचल्तीको भाषामा यसलाई बाथ रोग भनिन्छ । जब शरीरमा युरिक एसिड बढ्छ, हाम्रो जोर्नी दुख्न थाल्छ । कतिपय अवस्थामा त हिँडडुल गर्नै गाह्रो हुन्छ । शरीरमा प्युरिन नामक तत्व टुक्रन्छ, तब शरीरमा युरिक एसिडको समस्या देखिन्छ । शरीरका कोषिका टुट्ने नयाँ बन्न प्रकृया चलिरहदाँ त्यसमा पाइने प्युरिन पनि टुट्न थाल्छ ।
प्युरिन टुक्रनाले शरीरमा रसायनिक असर देखा पर्न थाल्छ, जसले युरिक एसिड देखिन थाल्छ । यो रगतको माध्यमद्धारा मृगौलासम्म पुग्छ । साथै पिसाबको माध्यमद्धारा बाहिर निस्कन्छ ।
कसलाई हुन्छ युरिक एसिड…
तर युरिक एसिड बढे?